Xildhibaan Jangali: Wadahadalladu waxay ka bilaaba la’yihiin dhanka Somaliland – Hornafrik Media Network
Xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangali oo ka tirsan guddiga Dhab u heshiisiinta Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa sheegay inay diyaar yihiin oo ay wataan howshooda, isla markaana ay dhinaca Somaliland ka sugayaan guddigii wadahadallada ku matali lahaa.
Xildhibaanka oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in wada hadalka uu yahay mid labo dhinac ah, isla markaana ay rajeynayaan in wax walba oo jira in wada hadal lagu dhameeyo.
Xildhibaan Jangali ayaa sheegay in mar walba oo wadahadal la galo la gaari karo xal, isagoo xusay in guddigooda uu sameeyay qorshihii iyo istiraatiijiyadii ay ku howlgeli lahaayeen.
“Wadahadalka wuxuu udub dhexaad u yahay geeddi socodka nabadeynta iyo Midnimada Soomaaliyeed”ayuu yiri Xildhibaan Jangali.
Mar la weydiiyay in waqtiga dowladda ka harsan uu hal sano ka dhiman yahay sida ay u suura geli karto wada hadaladan iyo haddii dowladdan hada jirta ay meesha ka baxdo oo timaado dowlad akle ayuu xusay in howsha guddigooda aanu ku xirneyn kaliya maamulka hada jira, isagoo intaa ku daray in qorshaha ay diyaariyeen uu yahay mid ay isticmaali karto Xukuumadda soo socota.
Tan iyo markii dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo xilka qabatay ma jirin wax wadahadal toos ah oo dhex maray Soomaaliya iyo Somaliland, iyadoo ay jireen caqabado badan oo ku yimid wadahadalladaas, kuwaas oo ka mid ah tallaabooyin ka dhan ah Somaliland oo ay qaaday dowladda Federaalka.